Shoko RaMwari Rinovimbika
"Nokuti hatina kutevera ngano dzakarongwa nevanhu, nguva yatakakuzivisa simba, nokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu, asi takanga tiri vanhu vakavona humambo hwake" (2 Petro 1:16 KJV).
Shoko raMwari rinogona kuvimbwa naro. Unogona kuisa hupenyu hwako pariri. Izvi ndizvo zvatinovona muna Mateo 24:35. Ndima iyi inotaura ichiti, "Denga nenyika zvichapfuvura, asi mashoko angu haangotongopfuvuri".
Magwaro iShoko raMwari. Ichi ndicho chokwadi. Magwaro aya anotaura pamusoro paJesu Kristu. Anorondedzera basa ravakaita. Basa iri ndiro rakaita kuti zvigone kuti tiwane ruponeso. Ibasa rokufa kwavo, kuvigwa, kumuka kuvakafa, nokukwira kudenga. Magwaro anotizivisavo nezvesungano itsva. Iyi isungano yavakaita pavakafa. Nhoroondo dzose idzi ndedzechokwadi. Tinogona kuvimba nadzo. Pamusoro pazvo, tinofanira kudzishandisa pakurarama kwedu.
Izvi ndizvo zvatinovona mumashoko aPetro. Petro akataura pamusoro penhoroondo iri muna Mateo 17. Tinoverenga mashoko ake mutsamba yake yechipiri. Anotsanangura kuti akavona Hushe hwaJesu. Akahuvona musi wakashanduka Jesu chiso. Izvi zvakaitika vari mugomo. Vakanga vari vose naJakobo, naJohane. Musi uyu, chiso chaJesu chakapenya sezuva. Nguvo dzavo dzakabwinya. Vana Petro vakabva vavona Mosesi, naEriya. Vakanzwazve inzwi. Inzwi iri rakanga richibva kudenga. Tinoverenga mashoko aro muna Mateo 17:5. Rakati, "... Uyu Mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira, mumunzwei".
Kunyangwe zvakadero, Petro anotiyambira. Tinoverenga yambiro yake muna 2 Petro 1:19. Akati, "Vuye tine shoko rechiprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita semwenje unovhenekera mune rima, kusvikira hutonga huchitsvuka, nenyamasase ichibudira mumoyo yenyu". Petro akafemerwa naMweya Mutsvene kutaura mashoko aya. Hongu, vanhu ava vakanga vavona kubwinya. Vakanga vakuvona nemeso avo. Asi izvi zvakanga zvisina kukwana. Hazvisi izvo zvatinofanira kuvimba nazvo. Pane chinovimbika kudarika zvavakavona izvi. Chinhu ichi iShoko raMwari. Ndizvo zviri kutaurwa naPetro mundima iyi.
Saka batisisa kuShoko raMwari. Ungavona zvinhu. Ungasangana nezvinhu. Usavimba nezvinhu izvi. Shoko raMwari ndiro raunofanira kuvimba naro. Saka unganzwa marwadzo munyama yako. Kuda ungava nechirwere munyama yako. Usagamuchira izvozvo. Usabva watofunga kuti warwara. Shoko raMwari ndiro rinokuzivisa chokwadi chezvinenge zviri kuitika. Ndiro rinoreva chokwadi. Ndiro raunofanira kuvimba naro.
Shoko iri ringaita serisiri kushanda. Panogona kuita sepasina chiri kushanduka. Usavora moyo. Batirira kuShoko raMwari. Ramba uchiritaura. Ritaure kuna Mwari. Ritaure kuzvinhu izvi. Ramba uchiritaura. Uchanzwa kukunda mumweya mako.
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Shoko renyu rine simba. Shoko iri ndiro randinovimba naro. Ndicho chiprofita chandakagamuchira. Ndiro randinoshandisa pakurarama kwangu. Ndiro randinoshandisa kuvaka hupenyu hwangu. Nokudaro, simba raro riri kushanda mandiri nhasi. Riri kusika zvarinotaura mandiri. Shoko iri rinogara nokusingaperi. Ndinoshandisa simba reShoko renyu. Nokudaro, ndinokunda pahondo yerutendo. Ndinokunda hondo iyi nguva dzose. Muzita raJesu. Ameni.